खुट्टामा औठी लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के ?
सेप्टेम्बर 1, 2016 नोभेम्बर 19, 2018 साइन्स इन्फोटेक
विवाहिता हिन्दु महिला खुट्टाको दोस्रो औलामा औठी पहिरिन्छन् । महिलाको लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । हिन्दीमा यसलाई ‘बिछुवा’ भन्ने गरिन्छ । किन पहिरिन्छन् खुट्टाको औलामा चक्रजस्तो औठी ? यसका पछाडि पनि वैज्ञानिक कारण लुकेको छ ।
खुट्टाको जुन औलामा औठी लगाइन्छ त्यसको कनेक्सन गर्भाशय र मुटुसँग हुन्छ । यसलाई पहिरिदा महिला सजिलै गर्भधारण गर्न सक्दछन् भने महिवारी चक्र पनि नियमित हुन्छ । औठी चाँदीको हुने भएका कारण जमिनबाट यसले उर्जा ग्रहण गर्दछ र पूरा शरीरमा पुयाउँदछ ।
साउन महिनामा काँचका हरियो चुरा लगाउने वैज्ञानिक कारण के ?
मंगलसुत्र लगाउनाको वैज्ञानिक कारण के ?
सिन्दुर लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के ?
कानमा पहिरिने बाली र झुम्काको वैज्ञानिक कारण के ?
← सिन्दुर किन लगाइन्छ ?
कानमा पहिरिने बाली र झुम्काको वैज्ञानिक कारण के ? →